FIKARAKARAKA NY FIFIDIANANA: Voatendry avokoa ireo mpikambana sivy mandrafitra ny Ceni – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:13
Ireo mpikambana vaovao no hikirakira ny fifidianana amin'ny 2023.
Accueil/Politika/FIKARAKARAKA NY FIFIDIANANA: Voatendry avokoa ireo mpikambana sivy mandrafitra ny Ceni
FIKARAKARAKA NY FIFIDIANANA: Voatendry avokoa ireo mpikambana sivy mandrafitra ny Ceni
Noraisin’ny Filohan’ny Repoblika omaly faha 19 novambra 2021 ny didim-panjakana laharana faha 2021-1305 izay anendrena ny mpikambana voatendrin’ny Filohan’ny Repoblika sy anamarinana ny fahalanian’ny mpikambana voafidin’ny Fitsarana Tampony. Ny 30 Oktobra 2021 lasa teo, raha tsiahivina, no noraisina ny didim-panjakana laharana faha 2021-1200 nanendry ireo mpikambana fito voalohany.
Taorian’ny fanendrena ireo mpikambana voafidy handrafitra ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na CENI tamin’ny sabotsy 30 oktobra 2021, dia noraisina omaly faha 19 novambra 2021 ny didim-panjakana laharana faha 2021-1305 izay anendrena ny mpikambana voatendrin’ny Filohan’ny Repoblika sy anamarinana ny fahalanian’ny mpikambana voafidin’ny Fitsarana Tampony. Fantatra tao anatin’ity didim-panjakana ity, araka izany, fa Andriamatoa Dama Andrianarisedo Retaf Arsène no notendren’ny Filoha hisolotena azy eo anivon’ny Ceni. Andriamatoa Randrianarivonantoanina Tiana Ifanomezantsoa kosa no voafidin’ny Fitsarana Tampony izay namoahan’ny Filoham-pirenena didy fanendrena omaly ihany koa. Feno, araka izany, ankehitriny ny isan’ireo mpikambana vaovao handrafitra ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na CENI, araka ny voafaritry ny lalàna.
Mpikambana fito efa notendrena
Tsiahivina fa araka ny didim-panjakana laharana faha 2021-1200, noraisina ny Sabotsy 30 Oktobra 2021 teo, dia notendren’ny Filohan’ny Repoblika ho mpikambana handrafitra ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na ny CENI mandritry ny enina (06) taona manaraka, ireo olona miisa fito voafidy isak’ireo rafitra manana anjara solontena amin’izany. Tafiditra ao anatin’izany Atoa Razafimamonjy Laza Rabary izay avy amin’ny Antenimierandoholona. Eo koa Atoa Houssene Abdallah, izay voafidin’ny Antenimieram-pirenena. Voafidin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana kosa Atoa Fidimiafy Roger Marc. Etsy ankilany, voatendry ho eo anivon’ny Ceni ihany koa Atoa Jeannot Guy Georges Razafindraibe izay voafidin’ny holafitry ny Mpisolovava. Atoa Andriamarotafikatohanambahoaka Ralaisoavamanjaka kosa indray no solontenan’ny mpanao gazety notendren’ny Filoha. Ary solontena avy amin’ireo fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin’ny fanaraha-maso ny fifidianana kosa Atoa Ravalitera Jacques Michaël sy Atoa Andriamalazaray Andoniaina.
FAMPIANARANA AMBONY : Taom-pianarana telo no tsy maintsy harindra miaraka
FIFANINANANA ROBOTIKA: Fahefatra maneran-tany i Madagasikara hatreto
MAHINA NOHO NY FANDIKAN-DALÀNA: Nisitri-belona koa i Guy Maxime Ralaiseheno
LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO: “Tsarao amin’ny asa vitako ato amin’ny Minisitera aho”